बन्दमा यस्तो देखियो काठमाडौँको सडक, बाहिर कस्तो छ अवस्था ? बाहिर निस्किनु अघि यो पढ्नुहोस – Sandesh Press
बन्दमा यस्तो देखियो काठमाडौँको सडक, बाहिर कस्तो छ अवस्था ? बाहिर निस्किनु अघि यो पढ्नुहोस
November 16, 2021 193
नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मंगलबार नेपाल बन्दको आह्वान गरेको छ । काठमाडाैं । नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले इन्धनमा गरिएको अस्वभावित मूल्यबृद्धिको विरोधमा आज आह्वान गरेको नेपाल बन्दको प्रभाव राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा सामान्य परेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थसहितका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा गरिएको मूल्यवृद्धि तत्काल खा’रेज गर्न सरकारलाई जनदबाब दिने भन्दै नेकपाले कात्तिक ३० गते बन्द आह्वान गरेको थियो ।
मंगलबार बिहान सार्वजनिक सवारीहरू कम चले पनि निजी सवारी सडकमा निर्बाध गुडिरहेका छन् । सडकमा बिस्तारै सवारीको चाप बढ्दै गइरहेको छ । चोक चोकमा सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ ।
काठमाडौंबाट छुट्ने लामो दूरीका सवारी साधन भने चलेका छैनन् । लामो दूरीका सवारी सन्चालकहरु बन्दको प्रभाव र प्रदर्शनकारीको उपस्थिति हेरेर दिउँसोदेखि चलाउने मनशायमा छन् ।उपत्यकाका कतिपय विद्यालयले आजका लागि विदा दिएका छन् ।काठमाडौं : नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आह्वान गरेको नेपाल बन्दको प्र’भाव देशभर परेको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिको वि’रोधमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाले ब’न्दको आह्वान गरेको हो।
नेपाल ब’न्दको काठमाडौं उपत्यकामा आं’शिक प्र’भाव देखिएको छ। ब’न्दका कारण उपत्यकामा सार्वजनिक सवारीसाधन कम चलेका छन्। प्रहरीले विभिन्न चोकमा सुरक्षा व्यवस्था क’डा पा’र्ने कोसिस गरिरहेको छ। बालाजु, नयाँ बसपार्क, कोटेश्वर, बल्खु‚ चाबहिललगायत क्षेत्रमा यात्रुको संख्या बढिरहेको र यातायातका साधनहरु कम मात्रामा चलेको प्रहरीले जनाएको छ।
काठमाडौंबाट छुट्ने लामो दूरीका सवारी साधन भने चलेका छैनन् । लामो दूरीका सवारी सन्चालकहरु ब’न्दको प्र’भाव र प्रदर्शनकारीको उपस्थिति हेरेर दिउँसोदेखि चलाउने मनशायमा छन् । उपत्यकाका कतिपय विद्यालयले आजका लागि विदा दिएका छन् ।
निजी सवारी साधन भने सार्वजनिक यातायातको तुलनामा बढी संख्यामा सञ्चालनमा छन्। यातायातका साधन सञ्चालनमा अ’वरोध गर्दै हिँडेका केही व्यक्तिलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। साँखु, महाराजगञ्ज लगायतका क्षेत्रबाट ५ जनालाई नि’यन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ।
यस्तै‚ ब’न्दका कारण लुम्बिनी प्रदेशका रुपन्देही, दाङ, बाँके, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, नवलपरासी, कपिलवस्तुलगायतका जिल्लाको जनजीवन प्र’भावि’त बनेको छ। ब’न्दले लामो तथा छोटो दूरीका सवारीसाधन सञ्चालन भएका छैनन् भने बजार, उद्योगधन्दा, कलकारखाना‚ शैक्षिक संस्थाहरू ठ’प्प छन्। सहरका केही भित्री भागमा भने पसल फा’टफु’ट खुलेका छन्।
तनहुँमा ब’न्द ग’राउन सडकमा ख’टिएका नेकपाका ११ जना कार्यकर्ता दमौलीबाट पक्राउ परेका छन्। मंगलबार बिहानैदेखि नेपाल बन्द गराउन सडकमा ख’टिएका विप्लव निकट सो पार्टीका ११ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।
ब’न्दको अ’सर पोखरामा पनि परेको छ । प्रहरीले बिहानैदेखि सुरक्षा व्यवस्था क’डा पारेको छ । ब’न्द गराउँदै हिँड्का नेकपा कास्कीका सदस्य काजी गुरुङ र अखिल (क्रान्तिकारी)पृथ्वीनारायण क्याम्पस समितिका उपाध्यक्ष युवराजसहित आठ जनालाई प्रहरीले नि’यन्त्र’णमा लिएकाे छ ।
कास्कीका डीएसपी सुन्दर तिवारीले पक्राउ परेकासँग सोधपुछ भइरहेको बताए । नेकपाका कार्यकर्ताले पाेखराका विभिन्न चोक र सडकमा टा’यर बा’ले’र प्र’दर्शन गरेका छन् । पोखरामा बिहानैदेिख ब’न्दको प्र’भाव छ । सार्वजनिक यातायात ठ’प्प छ भने निजी सवारीसाधन पनि फा’ट्टफु’ट्ट गुडेका छन् । बजार बन्द छ। अ’त्याश्यक ढुवानीका मालबाहक गाडी भने चलिरहेका छन् ।
Prevनेपाल बन्दको असर काठमाडौं उपत्यकामा परेन, सवारीसाधनहरु चल्न थाले
Nextजनगणना गर्न खटिएकी यी महिला यसकारण पक्राउ परिन, कारण थाहा पाउदा छक्क पर्नु हुनेछ !
दुई वर्षमा ६ जनासंग बिहे, सबैका अगाडि बाइकमा बसेर प्रेमीसँगै भागिन् बेहुली
चक्रवात ‘ताउ-ते’ को असरले नेपालमा आज र भोलि भिषण वर्षा वर्षा हुँदै, सतर्क रहन आह्वान
पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, मंसिर २८ गते मंगलबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
पल शाहले हिरासत बाटै लेखे आमालाई सन्देश, (4586)